उत्तम अपराध उपन्यास पुस्तकहरू, सबै भन्दा प्रशंसित उत्कृष्ट कृतिहरू | वर्तमान साहित्य
उत्तम अपराध उपन्यास पुस्तकहरू
जब एक नेटिजेन गुगल "सर्वश्रेष्ठ अपराध उपन्यास पुस्तकहरू", पर्दा २० औं शताब्दीको सबैभन्दा लोकप्रिय हत्या शीर्षकहरू प्रदर्शन गर्दछ। यो खोजको सम्बन्धमा अ -्ग्रेजी बोल्ने प्रयोगकर्ताहरूको मामला पनि हो अपराध कल्पना (अंग्रेजीमा जीनसको नाम)। यस कारणका लागि, अपराध उपन्यास भेरिएन्ट वा जासूस पदहरूको सबजेनर मानिन्छ।
यस सम्बन्धमा, सबैभन्दा उच्च लेखकहरूको काम अपरिवर्तनीय छ जब सबै भन्दा मोडिएको अपराधहरू पुन: प्रयास गर्दछौं। त्यो हो, Dasiell ह्यामेट, अगाथा क्रिस्टी, जेम्स एम। केन वा रेमंड चांडलर, केहि अग्रदूतहरु को नाम। हालसालका समयमा, यो पेट्रसिया हाइस्मिथ, स्कट टुरो, जेम्स एलोय र रूथ रेन्डेल जस्ता लेखकहरूको काम हाइलाइट गर्न लायक छ।, अरु मध्ये। यहाँ उत्तम अपराध उपन्यास पुस्तकहरूको सूची छ।
1 रेड हार्वेस्ट (१ 1929 २)), ड्यासिल ह्यामेटद्वारा
1.1 दिन को क्रम मा मृत्यु
2 पोष्टम्यान सँधै दुई पटक कल गर्दछन् (१ 1934 XNUMX), जेम्स एम। केन द्वारा
2.1 तर्क र संश्लेषण
3 अनन्त स्लीप (१ 1939 XNUMX)), रेमंड चन्डलर द्वारा
3.1 नयाँ प्रकारको जासूस
4 टेन लिटिल कालोहरू (१ 1939 XNUMX)), अगाथा क्रिस्टी द्वारा
4.1.1 प्रत्येक मृत्यु, एक कम कालो
5 केहीले २० औं शताब्दीको उत्तरार्धमा अपराध उपन्यासहरू सिफारिस गरे
5.1 स्टोन इन ट्रायल (१ 1977 XNUMX), रूथ रेन्डेल द्वारा
5.2 एक ट्रेन मा अपरिचित (१ 1983 XNUMX), पैट्रसिया Highsmith द्वारा
5.3 स्कॉट ट्रोव द्वारा मासूम (1986) माने
5.4 ब्ल्याक डहलिया (१ 1987 XNUMX), जेम्स एलोरोइ द्वारा
रातो फसल (१ 1929 २)), Dasiell Hammett द्वारा
धेरै विद्वानहरूले औंल्याए रातो फसल (अंग्रेजीमा मूल नाम) शीर्षक हो कि औपचारिक रूपमा अपराध उपन्यासको उद्घाटन। ठीक छ, अमेरिकी लेखक ह्याम्मेट उनी १ th औं शताब्दीको जासूस क्लासिकको आर्केटाइपबाट टाढा सर्ने पहिलो व्यक्ति थिए।। वास्तवमा, यस कथाको नायकको पोको डुपिन वा डोएलको होम्सको दोषविहीन नैतिकतासँग कम सम्बन्ध छ।
यसको सट्टामा, हेमेट एक एजेन्ट प्रस्तुत गर्दछ जो आफ्नो उपस्थितिबाट अत्यन्त लापरवाह छ, अत्यन्त हठी, व्यक्तिवादी र अपरंपरागत विधिहरूको। यस चरित्रमा अवलोकनको लागि असाधारण क्षमता छ भन्ने तथ्य हुँदाहुँदै पनि उसले अनुसन्धानमा डिडक्टिभ तर्क प्रयोग गर्दैन। बरु, उसले "सडकहरू लात हान्न" र आफ्ना विशेष कानूनहरू पालना गर्दछन् अपराधहरू समाधान गर्न।
दिन को क्रम मा मृत्यु
En रातो फसल २ violent हिंसात्मक मृत्युहरू वर्णन गरिएको छ। यसैले, यो अमेरिकी समाजको सबैभन्दा रूढीवादी क्षेत्र द्वारा आलोचना गरिएको पुस्तक थियो। थप रूपमा, उपन्यासको विकासमा अनगिनत हत्याहरू नरसंहार, गिरोहको मुठभेड र "संपार्श्विक मृत्यु" को बिच हुने गर्छ।
रातो फसल (यो पुस्तक ...
हुलाकी हुनुहोस् जहिले पनि दुई पटक कल गर्दछ (१ 1934 XNUMX), जेम्स एम। केन द्वारा
यस उपन्यासमा उजागर गरिएको यौन र हिंसाको अचम्मलाग्दो संयोजन (विशेष गरी यसको प्रकाशनको समयमा) बोस्टन अधिकारीहरूको बदनाम भयो।। तसर्थ, पोष्टम्यान सँधै रिंग गर्दछ त्यो अंग्रेजी शहरमा अंग्रेजीमा टाइटल प्रतिबन्ध लगाइएको थियो। माथि उल्लिखित कन्जेक्चरले बिक्रीमा एकदमै सफल पुस्तकमा जनताको चासो बढायो।
तर्क र संश्लेषण
फ्रान्क एक क्षुद्र tramp र कोन मानिस हो जो एक क्यालिफोर्निया देश क्षेत्र मा स्थित एक रेस्टुरेन्ट मा काम शुरू गर्दछ। त्यहाँ उनी प्रतिष्ठानको मालिक निक "ग्रीक" की युवती पत्नी कोराको प्रेममा परिणत भए। किनकि उनी आफ्नो पतिको लामो समयसम्म उभिन सक्दिनन् (जो केहि बर्ष पछि टाढा छ), फ्रान्क र कोराले निकको हत्या गर्ने योजना बनाए।
बाथटबमा असफल प्रयास पछि, आपराधिक जोडी एक यातायात दुर्घटना अनुकरण गरेर आफ्नो मिशन को प्राप्त। यद्यपि मुद्दाका अभियोजकहरूले हत्याराको दोष प्रमाणित गर्न असफल भए पनि अन्ततः दुबै वकिलले बहकाउँछन् र एक अर्कालाई दोषी ठहराउँछन्। अन्तमा, कोरा कार दुर्घटनामा मारिए र फ्रान्कलाई मृत्युदण्ड सुनाईयो।
पोष्टम्यान सधैं जहिले कल ...
अनन्त सपना (१ 1939 XNUMX)), रेमंड चन्डलर द्वारा
ठूलो निन्द्रा English अंग्रेजीमा मौखिक शीर्षक - लेखक र्यामण्ड चण्डलरको अपराध उपन्यासको क्षेत्रको क्रुद्ध प्रतिनिधित्व गर्दछ। अनुसार Le Monde, बीसौं शताब्दीका १०० सर्वश्रेष्ठ पुस्तकहरू मध्ये एक हो। त्यस्तै गरी यस पदले अमेरिकी लेखकको सबैभन्दा लोकप्रिय चरित्र फिलिप मार्लोको पहिलो औपचारिक उपस्थितिको रूपमा चिन्ह लगायो, जसमा लस एन्जलसको कथा सेट गरिएको थियो।
नयाँ प्रकारको जासूस
वास्तवमा, निजी अन्वेषक मार्लो छोटो कथामा पहिले देखा पर्दछन् बिश्वासी (1934)। यद्यपि यस कथामा द्यासिल ह्यामेटले म्यागजिनका प्रकाशनहरूमा उल्लेख गरेको "अण्डरवर्ल्ड" एजेन्टको विशेषता स्पष्ट छैन। कालो मास्क.
यद्यपि, मा अनन्त सपना निराशावादी, उन्मत्त र आदर्शवादी जासूस राम्रोसँग परिभाषित भएको देखिन्छ, "अन्तले साधनहरूको औचित्य प्रमाणित गर्दछ"। यो अधिक छ, मार्लोले आफ्नो शंकास्पद नैतिक कोडमा नियमहरू मिलाउने कुनै पश्चाताप वा डर महसुस गर्दैनन्। उहाँको माफी: यस्तो भ्रष्ट समाजको फोहोरको बीचमा विजय पाउने यो एक मात्र तरीका हो।
जर्नर भनेर चिनिने कसैलाई घूस दिनको लागि सामान्य स्टर्नवुडले मार्लोको सेवाहरू अनुरोध गर्दछन्। उत्तरार्द्धले सामान्यको कान्छी छोरी कार्मेनको ofणको फाइदा लिन चाहन्छ। तर, जब जिगर आफ्नो अपार्टमेन्टमा कार्मेनको साथ गोली हालेको देखिन्छ (फ्याँकियो र ड्रग गरिएको थियो), फिलिपले थाहा पाए कि त्यो कार्य भर्खरै सुरू भएको थियो।
अनन्त निद्रा (फिलिप ...
दस साना कालो (१ 1939 XNUMX)), अगाथा क्रिस्टी द्वारा
अंग्रेजीमा शीर्षक दिइएको र त्यसपछि त्यहाँ कोही पनि थिएन, को एक वास्तविक मास्टरपीस छ बेलायती लेखक. कथा सुरु हुन्छ जब आठ जना मानिसहरू छुट्टीमा नेग्रोको सुन्दर टापुमा आइपुग्छ (काल्पनिक)जहाँ एक मात्र विशाल फार्म छ बेनामी मालिक द्वारा स्वामित्वको एक idyllic परिदृश्य को बीचमा। त्यहाँ, जादुगर पात्रहरूलाई होस्टका नोकरहरू (श्री र श्रीमती रोजर्स) द्वारा अभिवादन गरिएको छ।
तिनीहरूको सम्बन्धित कोठामा प्रवेश गरेपछि, पाहुनाहरूले भित्तामा झुन्डिएको "डायज नेग्रिटोस" गीतको प्रतिलिपि फेला पार्दछन्। पछि, अतिथिहरूले खाने कोठामा दश पोर्सिलेन (कालो) मूर्तिहरू हेर्छन्। खाना खाइसकेपछि, रेकर्डिले उपस्थित सबैलाई (नोकरहरू लगायत) विगतमा मृत्युदण्डमा पाप गरेको वा दोषी बनाएको आरोप लगायो।
प्रत्येक मृत्यु, एक कम कालो
भवनको बाहिर एउटा भयंकर आँधीबेहरी आयो। त्यसैले हत्याहरू सुरु हुँदा कोही पनि उम्कन सक्दैनन्। प्रत्येक मृतक संग, एक प्रतिमा पनि गायब हुन्छ। डराउने डिनरहरूका लागि सबैभन्दा खराब कुरा यो हो कि एउटा मुद्दा चाँडै नै स्पष्ट हुन्छ: निर्दयी हत्यारा बचेकाहरूमध्ये एक हो।
केहीले २० औं शताब्दीको उत्तरार्धमा अपराध उपन्यासहरू सिफारिस गरे
ढु judgment्गा मा एक फैसला सेट (१ 1977 XNUMX), रूथ रेन्डेल द्वारा
"युनिस पार्चमेन्टले कभरडेल परिवारलाई मार्यो किनभने उनी लेख्न र लेख्न सक्दिनन्।" पाठक सुरुमा यो प्रकट भइरहेको वाक्यांश हो, जसले कथानकको सम्पूर्ण कोर, पीडितहरू र अपराधीको पहिचान समेट्छ। यद्यपि यस्तो वाक्यले उत्कृष्ट उत्कृष्ट विक्रेता बनेको उत्कृष्ट कृतिबाट भावनाहरूको आवाश्यकता लिन सक्दैन र यो सफलतापूर्वक सिनेमा अनुकूलित गरिएको छ कि।
ढुone्गाको फैसला, म ...
रेलमा अपरिचितहरू (१ 1983 XNUMX), पैट्रसिया Highsmith द्वारा
दुई हताश मानिसहरू (हत्या गर्ने अघिल्लो विचार संग) एक ट्रेन मा भेट्छन् र एक macabre सम्झौता। तिनीहरू दुबै आफ्नो लक्ष्य आदानप्रदान गर्न सहमत छन्। तर ती मध्ये एक जनाले पत्राचार गर्ने सौदालाई पछ्याईरहेको छ, अर्को अर्को सिकारी र सिकारको डरलाग्दो र क्लस्टरोफोबिक खेलमा समातिएको छ।
रेलमा अपरिचित: ११ ...
निर्दोष ठानियो (1986), स्कट ट्रोव द्वारा
सफल जिज्ञासु वकिल रस्टि सबिचको संसार उल्टो भयो जब उसको प्रेमीलाई बलात्कार गरियो र हत्या गरियो। यस कारणले गर्दा, उनी अपराधमा मुख्य संदिग्धको रूपमा देखिन्छन्। फलस्वरूप, सबिच कसैलाई पनि आफ्नो निर्दोष प्रमाणित गर्न विश्वास गर्न बाध्य छन र भ्रष्टाचार र विश्वासघातको सम्पूर्ण नेटवर्क खोल्छन्।
अनुमानित निर्दोष (सर्वश्रेष्ठ ...
कालो dahlia (१ 1987 XNUMX), जेम्स एलोरोइ द्वारा
लस एन्जलस, १ 1947। XNUMX। बहसको सुरूवात बिन्दु एक युवतीको खोज हो - जसलाई मिडियाले बप्तिस्मा लिएको छ कालो Dahlia- यातनाको स्पष्ट संकेत संग। वास्तवमा, यो पुस्तक एलिजाबेथ छोटोको वास्तविक केसमा आधारित छ। उनी एक हलिउड वानाब थी, जसको हत्याले क्यालिफोर्नियाको इतिहासमा सब भन्दा व्यस्त र प्रसिद्ध खोजीहरू मध्ये एकलाई जगायो।
कालो दहलिया: चौकडी ...
लेखको पूर्ण मार्ग: वर्तमान साहित्य » विधाहरू » कालो उपन्यास » उत्तम अपराध उपन्यास पुस्तकहरू
सब भन्दा राम्रो डरावनी पुस्तकहरू (भाग दुई)